Macmacaanka salad baradho iyo diyaarinta - Sida loo guulaysto salad baasto
Waraaqda salad baradho ah oo laga sameeyey baakad dhir
Ma jiraan wax badan oo ka mid ah taarikada Jarmalka sida noodles. Waxay diyaar u yihiin dhammaan foomamka la taaban karo. Mararka qaarkood waxay ku dhow yihiin gossamer, ka dibna ku dhawaad ​​muddo dheer, ama waxay ku dhamaanayaan dheriga biyo kulul. Kaliya munaasabada munaasadda baastada wali waxay leedahay muuqaal guud oo ku habboon noodbeerka ugu fiican ee saxan. Marka laga soo tago talo soo jeedinta maaddooyinka khafiifka ah, waxaan bixinnaa cunto karis ah oo saladh ah.
Waxaa laga yaabaa in taglagaariyo ama farfalle - ama ay tahay in ay noqotaa nooca caadiga ah ee spaghetti? Mar labaad iyo mar labaad, su'aasha isku mid ah ayaa soo baxaysa: Sidee bay caafimaad qabtaa? Yaa wax ka qabanaya jawaabaha, ayaa ka soo baxaya gabagabada: Yaa ka qaata noodle ee dhexdhexaadinta, nolol caafimaad leh, sababtoo ah baastooladu waa il ah tamar badan.
Salad baradho ah oo salad ah oo saladh ah oo saladh ah
Si kastaba ha noqotee, waxaa lagula talinayaa in la eego macdanta kalooriga ee suugada. Tani waxay si cad u tahay halka saladhka casho ee caanka ah ay ku soo baxaan ciyaarta, maxaa yeelay waa saddexda: dhadhan fiican, mid caafimaad leh iyo caafimaad leh.
Waxaa jira tiro badan oo cuntooyin ah oo saladh ah oo salad ah oo udubdhexaad u ah cuntooyin badan sida saxan dhinaca.
Dabcan, sidoo kale barbecue ee beerta ama koorsada ugu caansan ee xafladda dhalashada carruurta. Mararka qaarkood walaxda noodleerka ayaa leh qamriga caadiga ah ee Asia, mararka qaarkood saladku waa mid caadi ah - tusaale ahaan yaanyada cherry, strips of digaag, salmon ama asparagus. Khayaaliga ogyahay wax xuduud ah, sababtoo ah xitaa qolofta, lakabka, roogaga ama avocado waxay ku haboon yihiin sida suxuunta dhinaca.
Si kastaba ha noqotee, waa inaad bixisaa dareen badan inta aan la helin saladhka baastada
Nadiifinta fiicnayd waxaa la bixiyaa oo kaliya marka saladku uu diyaar yahay. Haddii aysan suurtagal ahayn, tusaale ahaan cidhiidhiga waqtiga, saladhku waa inuu soo afjaraa "hibernation" qaboojiyaha ugu yaraan hal saac ka hor inta aanad u adeegin.
Haddii baastada la kariyo, waa inay ahaadaan al dente, maxaa yeelay "ciribtirka" iyaga ma lahan marti farxad leh miiskiisa. Si aad u hubiso inaadan qallajin karin qadarka caanaha aan la karinin, waa inaad maskaxda ku haysaa qaddadan: boqol garaam oo noodle ah oo ku yaala gobolka qayba waxay u dhigantaa 200 ilaa 280 grams oo baasto la kariyey.
Ma aha oo kaliya wuu fiicanyahay, wuu jecel yahay qof walba. Si aad u sameyso laba qof oo faraxsan, kariska ama kariimku wuxuu u baahan yahay waxyaabahan soo socda
badhkeed oo ah casaan iyo badh ah basbaas huruud ah
laba karooti yar yar
160 grams ee brokoli
XIUMX grams of tagliolini ganaax
shan qaado oo saliid ah
in yar oo milix ah
laba yaanyo bislaado
Qaybta nus ee dhir cad
Shan beelood oo saliid ah
saddex caws ah oo ah kareemka liin
afar caleemood oo yar yar
Saddex xabbo oo basil ah
qaad ah oo ah liin iyo liin
taabasho oo ah basbaaska madow oo laga soo saaro mill.
Diyaarinta salad baasto:
Basbaaska waxaa lagu dubaa siddeed daqiiqo ka dib malabka, kadibna maqaarka maqaarka oo jarjar.
Karootada waa la diiriyaa oo jarjar xaleef khafiif ah, broccoli waa la kariyaa.
Noocyada waxaa loo kariyaa si kaamil ah biyo cusbo, dabacasaha iyo broccoli waxay ku hayaan shirkad afar daqiiqo ah.
Dabadeedna, baastada la qaboojiyey ayaa lagu kobciyey tamaandhada la jarjaray.
Dhammaan caleemaha waxaa la riixay ama la jarjarey.
Ugu dambeyntii, basbaaska iyo yaanyada ayaa lagu kululey lakabka khafiifka ah ee saliidda oo isku qasan ka yar baastada.
Aad bay muhiim u tahay: Saladhka baastada wuxuu ku yimaadaa isla markiiba kadib cusbo iyo cusbo miiska.
Quruxda quraacda quraacda ee American Cuisine
Cuntada barafka - qaniinyada hilibka duqadda ah ee la mariyo suugada barbecue
Boorash baradho ah
Qalabaynta dhadhanka qamriga ee qashinka
Cunista qashinka tufaaxa tufaaxa
Cunnida rootiga farmaajada Roodhida roodhida
Cunto subag leh subag macaan oo qashin ah
Roodaynta rootiga abuurka bocorka - Roodheynta Rootiga
Rootiga qamadi oo dhan - rooti roodhida
Cuntada Meksika - Cuntada Taco
Kalluunka & Biyaha Caalamka